Ny Samsung Gear S3 dia mahazo fiasa vaovao amin'ny fanavaozana | Androidsis
Samsung dia manavao telefaonanao maro mandritra ny herinandro. Saingy ny orinasa koreana koa tsy manadino ny fijeriny. Satria anjaran'ny fanavaozana lehibe ho an'ny Gear S3. Famantaranandro marani-tsaina an'ny orinasa nanomboka fanavaozana any Etazonia. Misaotra azy fa misy fiasa vaovao tonga amin'ny fiambenana. Vaovao tsara, satria roa taona lasa izay no nanombohana ity modely ity teny an-tsena.
Ampahafantarina fanatsarana ireo fiasa sasany ao amin'ny Samsung Gear S3. Misy ihany koa ny fanatsarana ny Samsung Health, ny fampiharana ara-pahasalamana hita amin'ny famantaran'ny marika Koreana. Ho avy àry ny fanovana ahafahana mampiasa tsara kokoa.
Ny fiasan'ny rafitra amin'ny famantaranandron'ny orinasa dia nihatsara mazava tsara. Amin'ny lafiny iray, nohatsaraina ny fahamarinany., ankoatry ny fampidirana fanovana ho tsara kokoa amin'ny fampandrenesana. Ho an'ireo mpampiasa liana dia nitombo koa ny isan'ny emoji azo ampiasaina. Etsy ankilany, misy fanovana madinidinika kely sasany.
Samsung Health angamba no manatsara indrindra amin'ity marika S3 ity. Fanatanjahantena bebe kokoa no ampidirina ao amin'ny fampiharana, izay hahafahan'ny mpampiasa manao hetsika isan-karazany na fampihetseham-batana miaraka aminy. Raha manao ny famataranandro ianao rehefa miofana, dia fanatsarana izay mety ho tonga mora raisina.
Ny fanavaozana ny Gear S3 an'ny marika Koreana manana lanja 300 MB. Hatreto dia vao nivoaka tany Etazonia izy io. Na dia ny zavatra mahazatra indrindra aza dia ny hamoahana azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa. Saingy tsy mbola misy fampahalalana momba izany avy amin'ny marika Koreana.
Izy io dia natao ho an'ny mpampiasa miaraka na ny kinovan'ny fiambenana. Noho izany, na manana ny Samsung Gear S3 Frontier na Classic ianao dia hanana fidirana amin'izany. Na dia tsy maintsy miandry ny orinasa aza isika hanamafy ny fandefasana azy. Manantena izahay fa afaka afaka andro vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny Samsung Gear S3 dia nohavaozina miaraka amina asa vaovao
Telegram dia nohavaozina manatsara ny fiasan'ireo vondrona (Lahatsary)
Ahoana ny fomba hanafohezana URL mivantana amin'ny Android